ミインチヨ's Likes - Myanmar Network
Back to ミインチヨ's Page
English for Hotel and Catering Industry English for Hotel and Catering Industry (Unit 1 Takingaphone call) - <a href="http://www.myanmar-network.net/forum/topics/english-for-hotel-and-catering-industry-unit-1">http://www.myanmar-network.net/forum/topics/english-for-hotel-and-catering-industry-unit-1</a> English for Hotel and Catering Indu… Discussion English for Hotel and Catering Industry5Likes
LIFE IN UK (Lesson 16 - Family Celebrations) LIFE IN UK – WEEKLY ENGLISH LESSON FROM BRITISH COUNCIL Sara meets her cousin Alice’s friend, Sophie. Sophie invites Sara to her birthday party and her wedding. Sara နဲ့သူ့ညီမဝမ်းကွဲ Alice ရဲ့သူငယ်ခ… Discussion LIFE IN UK (Lesson 16 - Family Celebrations) 21 Likes LIFE IN UK (Lesson 15 - The Seaside) LIFE IN UK – WEEKLY ENGLISH LESSON FROM BRITISH COUNCIL Fred, his cousin David and their friend Tom are in Brighton for the weekend. They stop to ask someone for directions to the beach. Fred၊ သူ့ညီ… Discussion LIFE IN UK (Lesson 15 - The Seaside) 18 Likes
ရန်ကုန်မြို့ ဗြိတိသျှကောင်စီတွင် TKT Prepa… TKT (Teaching Knowledge Test) Preparation သင်တန်းကို ဇူလိုင်လတွင် စတင်ဖွင့်လှစ်မည် ဖြစ်ပါသဖြင့် တက်ရောက်လိုသူများ ရန်ကုန်မြို့ ရှိ ဗြိတိသျှကောင်စီရုံး သို့ ဇူလိုင်လ (၁၇) ရက်မတိုင်မီ လာရောက်စာရင်းပေ… Discussion ရန်ကုန်မြို့ ဗြိတိသျှကောင်စီတွင် TKT Prepa…6Likes LIFE IN UK (Lesson 13 - Architecture) LIFE IN UK – WEEKLY ENGLISH LESSON FROM BRITISH COUNCIL Fred, his cousin David and their friend Tom arrive at the hotel in Brighton. Fred၊ သူ၏ ညီဝမ်းကွဲ David နှင့် သူငယ်ချင်း Tom တို့ Brighton မြို… Discussion LIFE IN UK (Lesson 13 - Architecture) 17 Likes IELTS Preparation: Power Writing for IELTS -… video IELTS Preparation: Power Writing for IELTS -… 48 Likes တစ်ကမ္ဘာလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန… ယခင်အပိုင်းမှအဆက် စတင်ပြောင်းလဲသံုးစွဲခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် လုပ်ငန်းတစ်ခု၏ အခြေခံဘာသာစကားကို ပြောင်းလဲပစ်ခြင်းသည် သေးငယ်သောတာဝန်တစ်ရပ် မဟုတ်ပါ။ (ပြောင်းလဲမှုပြုလုပ်ရန်)အဆင်သင့်ဖြစ်မှုကို ဆန်းစစ်သော ပုံစံ… Discussion တစ်ကမ္ဘာလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန… 13 Likes English Lessons from British Council and BBC // // // // // // // // // Page English Lessons from British Council and BBC 172 Likes LIFE IN UK (Lesson 11 - Holiday) LIFE IN UK – WEEKLY ENGLISH LESSON FROM BRITISH COUNCIL Fred is planningaweekend in Brighton with his cousin David and David’s friend, Tom. He phonesahotel to book some rooms. Fred သည် သူ၏ ညီဝမ်… Discussion LIFE IN UK (Lesson 11 - Holiday) 48 Likes [ PUBLIC TALK ] Magna Carta - Lessons for My… Magna Carta - Lessons for Myanmar in 2015 and Beyond?byRobert S. Pe (Senior Legal Adviser to Daw Aung San Suu Kyi)Daw Tin Tin Yee (A2J Advisor, Promoting Rule of Law Project, USAID/Myanmar)U Kyaw Myi… Discussion [ PUBLIC TALK ] Magna Carta - Lessons for My… 17 Likes ဘွဲ့ရပြီးစ အလုပ်စလျှောက်သူတစ်ဦးအတွက် CV ရေး… အလုပ်ခန့် အပ်သူများထံမှ ပြန်လည်ပြောကြားချက်များကို ကြည့်မည်ဆိုလျှင် ကိုယ်ရေးရာဇ၀င်တစ်စောင်ပေါ်တွင် ပိုမိုတိုတောင်းပြီး၊ လိုရင်းရောက်သော ဘာသာစကားမျိုးသုံးထားခြင်းကို ပိုမိုနှစ်သက်သည့်ဘက်သို့ ပြောဆိုလေ့… Discussion ဘွဲ့ရပြီးစ အလုပ်စလျှောက်သူတစ်ဦးအတွက် CV ရေး… 47 Likes